WordPress fiarovana sy fiarovana | Martech Zone
WordPress fiarovana sy fiarovana
Alatsinainy, Jolay 1, 2013 Alatsinainy 1 Febroary 2016 Douglas Karr
Ny tranokalanay dia nampiantranoina Flywheel ary mpiara-miasa ihany koa izahay satria mino fa io no sehatra fampiantranoana WordPress tsara indrindra eto an-tany. Noho ny lazan'ny WordPress dia nanjary lasibatr'ireo mpijirika io. Tsy midika izany fa tsy ho sehatra azo antoka izy io, na izany aza, midika fotsiny izany fa tombotsoan'ny mpampiasa tsirairay mba hihazonana azy ireo hihazona ny sehatra, ny plugins ary hitazona ny tranokalany ho azo antoka. Avelantsika Flywheel ataovy betsaka ho anay izany!
WordPress dia iray amin'ireo rafitra fitantanana votoaty (CMS) malaza indrindra ampiasaina ary manodidina ny 17% amin'ireo tranonkala misy eo amin'ny Internet amin'izao fotoana izao no ampiasain'ity CMS ity. Miaraka amin'ny fitomboan'ny fampiasana ny WordPress ny filaminana sy ny fiarovana azy koa dia nanjary iray amin'ireo olana lehibe hiatrehana. Tamin'ny taona 2011 dia tranokalam-baovao miisa 144,000 mahery no voajirika ary nahatratra 170,000 tamin'ny taona 2012 ity isa ity.
WPTemplate dia nametraka fanatontoloana Sary torohay an'ny WordPress sy ny fomba fanao tsara indrindra amin'ny fitazonana azy ho azo antoka sy azo antoka.
Tags: SAMPANAvoafitaka ny wordpressfiarovana wordpressfiarovana WordPress
Ny sosialy no olana fa tsy ny media
WHYAnalytics: Iza no mitsidika ny tranokalanao?